UK oo Xasan Daahir Aweys hantidiisa xayirtay | KEYDMEDIA ENGLISH
UK oo Xasan Daahir Aweys hantidiisa xayirtay
Dowladda UK waxay amartay in la xayiro hantida 300 oo qof oo dheeri ah oo xiriir la leh ISIL iyo AL-QAACIDA, sida uu qoray Wargeyska The FINANCIAL.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dawladda Ingiriiska ayaa amartay in Xasan Daahir Aweys lagu daro liiska 300 oo qof oo hantidooda la xayirayo, maadaama uu yahay maskaxdii Kooxaha argagaxisadda Soomaaliya.
Xasan Daahir, oo ku jira Xabsiga NISA tan iyo 2014, ayaa hadda kamid noqday dadka Black List ugu jira dawladda Ingiriiska, isagoo lacagta dibadda u taalla la xayiray, gaar ahaan gudaha UK iyo dalalka Yurub, sida uu qoray wargeyska The Financial.
Lama oga in Xasan Daahir ay lacag u taallo bangiyo dibadda ah, laakiin waxay go'aanka dawladda Ingiriiska muujinayaa in hanti uu ku leeyahay meel ka baxsan Soomaaliya, taasina suurta-gal ka dhigayso in amarkan saameyn ku yeesho.
Wuxuu kamid ahaa aas-aasiyaashii Maxkamadihii Islaamiga, oo ka faracmay markii la burburiyay 2007 Kooxda Al-Shabaab, oo hadda noqotay mida ugu khatarta badan Geeska Africa, taasoo xiriir la leh Al-Qaacida.
Sababta mudada dheer xabsiga loogu hayo Xasan Daahir waxaa ugu wayn inuu diiday fekerka argagaxisadda inuu ka tanaasulo, oo caddeeyo in Al-Shabaab kamid ahayn iyo inuu cambaareeyo falalka argagaxisadda Kooxda.
Comments Topics: al-shabaab argagaxisadda uk xasan daahir